Igumbi leNdlu kaNonna 3 - LIVUNYIWE - I-Airbnb
Igumbi leNdlu kaNonna 3 - LIVUNYIWE
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguNonna'S House
UNonna'S House ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Kwisakhiwo esitsha kraca esiseDiniwid kwinduli encinci eyi-50 yeemitha ukusuka eDiniwid Rd, 1 min. ukusuka elwandle, isitudiyo esinefenitshala ngokupheleleyo ye-38sqm, ikhitshi, igumbi lokuhlambela elineshawa, ibhedi ephindwe kabini, isofa, umoya womoya, iWi Fi, igadi, akukho mbono wolwandle.
Entsha, ikhululekile, ifakwe umoya ngeefestile ezinkulu, ilungele abantu ababini, igadi kunye nendawo phambi komnyango, i-Wi-Fi, i-air cond, ukucocwa kwegumbi lemihla ngemihla kuphela, utshintsho lwelinen yonke imihla ye-5, ilungele ukurenta ixesha elide. Akukho mbono wolwandle. Unyango lwexesha kwindlu yonke kunye negadi.
4.78 · Izimvo eziyi-79
I-Diniwid iphakathi kwezona lwandle zidumileyo kwisiqithi, zithule kakhulu kwaye zikhululekile kunye neeklabhu zaselwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Nonna'S House
Intlanganiso eyamkelekileyo kunye nobukho obuqhubekayo.